Ahịa Business Asambodo maka Beginners & Ọkachamara | Ọ BỤ
Nyocha ndi oru ahia
Nhazi atụmatụ na Management N'ezie
Ịzụlite na Ịhụ Nlekọta Ihe Ndị Dị Mkpa
Ihe Ntuzi Ntuzi
Ụzọ Nhọrọ nke Ịghọ Onye Nyocha Ọchụmnta ego
1. Onye Mmezi Software
2. Nweta Asambodo Nyocha Business
3. Nlekọta oru
Ebee ka ịchọta onye nchịkwa azụmahịa
Ndị nyocha ahịa na-achọpụta nsogbu, mebie mkpa, na-emeso otu ọrụ, ma mara mgbanwe na ịmepụta azụmahịa. Ha na-emezi ma dozie usoro azụmahịa, dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ, ịba uru na mgbasa ozi na ndị ọzọ. Ihe ngwọta ha na-enye bụ ihe ọhụrụ. Mmasị maka ndị nyocha bụ na nrịgo na mpaghara niile.
Ndị na-achọ ọrụ chọrọ nkà ị nwere ike ịmụta na usoro nchịkọta azụmahịa. Nrịgo na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-azụ ahịa na-eme ka i zuo ezu maka akara ngosi. Ka o sina dị, mmemme akwụkwọ mmemme na-enye ọzụzụ kachasị mkpa. Usoro a na-akụzi usoro aghụghọ nke usoro nyocha ahụ ma na-enye ezigbo mmụta mmụta.
Usoro ahụ dị ịrịba ama nye ndị ọkachamara na ndị ọkachamara dị mkpa ka ha dị mkpa n'ịrụ ọrụ na-akpọsara na ndị ọzọ na-aga akwụkwọ.
Ihe nyocha nke azụmahịa bụ maka ndị nwere mmasị site n'inyere ndị ahịa aka ihe mgbaru ọsọ. Ụlọ akwụkwọ mahadum na mahadum na-enye ọrụ na ụlọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, ịganihu nke ọma na ịga n'ihu ọzụzụ. Ogologo ihe akwukwo akwukwo di nkpa nke otu afo ma choro ka i chebara 4 ihe omumu 10 tinyere ndi choputara.
Ịmụta ihe ndị dị na nchịkọta azụmahịa na-agụnye:
Akụkụ nke onye nyocha ahịa
Ịghọta ihe ndị dị mkpa nke mkpakọrịta
Nkwupụta kachasị elu banyere nyocha ahịa
Mmezi nke ntule nke oru ngo
Nyocha na ilekọta nsogbu ndị a chọpụtara na azụmahịa
Nchịkọta Business Analysis Fundamentals Agụmakwụkwọ
Usoro nlezianya azụmahịa na-eme ka ị mara akụkụ nke nyocha na ntinye aka ha na nzukọ. Ọ bụ nyocha oku na-ekewapụ ọrụ nke a onye nyocha ahịa. Ụfọdụ n'ime ọrụ gị na-eji usoro ndị dị mkpa na usoro iji chekwaa nsogbu azụmahịa, ịtụle mmezu nke ihe ngwọta, na nyocha ị ga-abịa.
In atụmatụ na njikwa, ị na-ewere usoro na usoro dị iche iche maka ịme ọrụ a site na ya. Ị gbakwunyere ọzọ na nchọpụta gbasara ihe ndị ọzọ. Ihe ndị dị na usoro ahụ bụ:
Ime ihe nile na-achọ
Ọnụ ego na-akwụ ụgwọ, ihe ndị bụ isi na ogo mmụta dum
Mkpa na mkpochapụ nke ọrụ ahụ
Nchịkọta Nchịkọta Mkpa
Usoro ahụ na-egosi usoro nke ịhazi nyocha, nzukọ, nchịkọta na nchịkọta ederede, dịka ọmụmaatụ, nnọkọ etiti, echiche echiche, na ndị ọzọ. Ị na-emewanye aka site na ịmepụta ihe ịchọrọ ịchọrọ.
Na nke a, ị na-achọpụta otu esi esi kwatuo ikpokọta ozi na ịchọ maka ngwọta nke na-agwa nsogbu nke onye ọlụlụ. Enweghi ike inweta nghazi ngwọta, ị nwale ma nyochaa ihe ndị ahụ.
N'ikpeazụ, ị na-atụle otú ịkwadebe nyocha. Ọganihu a na-agụnye nyocha na ịnweta ngwọta iji kwenye na njirimara na arụpụta mkpụrụ. Ngwọta kwesịrị izute onye ahịa chọrọ ma mezuo ihe ndị chọrọ. Ị ga-arụ ọrụ na-eme nyocha maka ikwenye na ngwọta ndị a chọrọ.
Ụzọ dị iche iche nwere ike ịbịaru gị nyocha ọrụ azụmahịa. Ogoro gị nwere ike ịka mma ma ọ bụrụ na IT na azụmahịa a dị elu. Ịghọta ngwugwu nke ahịa na-etinye gị n'ihu. E wezụga ịmụta ihe ị nwere ike ịme nwere ike inyere gị aka ịghọ onye nyocha ahịa:
Ndị mmepe software nwere ntinye ihe ọmụma na nyocha, na ikike mmekọrịta. Iche echiche gbasara ịzụ ahịa azụmahịa na ijikọta na ozi ngwanrọ software na-enyere gị aka ịkwado ego dị elu na ọrụ nchịkọta azụmahịa.
Debanye na mmemme akwụkwọ nyocha azụmahịa na ohere ị nwere njedebe afọ anọ na mpaghara, dịka ọmụmaatụ, Nchịkwa, nchịkwa data, akwụkwọ nlekọta, na azụmahịa. Ị ga-ewere ikike dị mkpa iji rụọ ọrụ dịka onye nyocha ahịa.
Ịgbanwe ọrụ ndị na-esote oge nke itinye aka na ụlọ ọrụ nwere ike iwetara gị mkpali na drama ọrụ. Ịtụle ịzụ ahịa azụmahịa iji nweta ntụgharị na iru eru gị ga-apụta. Ị ga-ọ bụghị nanị na-akpali azụmahịa, Ọzọkwa merie ọzọ.
Onye nyocha nke azụmahịa na-eji ihe eji eme ihe n'aka na ihe ọmụma na ikike dị iche iche iji welie ụdị azụmahịa. Usoro ahụ na-enyere gị aka ịkwụsị ma dozie mmemme azụmahịa, nweta ihe ndị a chọrọ, kọwaa ndị ọzọ n'ụzọ gara nke ọma, mee akwụkwọ ziri ezi, na ilekọta ihe ndị dị mkpa n'ime ndụ ahụ.
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kọleji na-enye usoro 4 afọ maka ihe omume nyocha nke azụmahịa na ndị gụsịrị akwụkwọ. Ụfọdụ òtù IT na-enye ihe ọmụmụ ndị ahụ. Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ ọhụrụ bụ ọhụụ pụrụ iche ebe ọ bụ na anyị nwere ọhụụ Oracle Certification nke ọhụrụ na ndị nyocha ọhụụ.
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ejikọta ya na nnyocha iji nyere ha aka ịgbanwe ọnọdụ ahụ. Ugbu a, nchọpụta azụmahịa bụ otu usoro azụmahịa na kọleji na ntọala ntọala ndị ọzọ gburugburu ụwa. Ị nwere ike wepụ ya site n'aka ya.